मानिसको व्यवहार जाँच्ने प्रणाली ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि मानिसको व्यवहार जाँच्ने प्रणाली !
चीनमा मानिसको व्यवहार जाँच्ने र्‍याङकिङ प्रणालीको जाँच भइरहेको छ । यसबाट पूरै देशका मानिसको व्यवहारमाथि नजर राख्न सकिने बताइएको छ । ‘सोसियल क्रेडिट सिष्टम’ नाम दिइएको यस प्रणालीको घोषणा पहिलोपटक सन् २०१४ मा गरिएको र सन् २०२० सम्म यसको सम्पूर्ण काम पूरा भइसक्ने बताइएको छ । लाखौं मानिसका लागि यसको शुरुआत पनि भइसकेको छ । चीनले यस सिष्टमको माध्यमबाट सबै मानिसको हरेक गतिविधिमाथि नजर राख्ने र सोहीअनुसार आवश्यक परेमा सजाय पनि दिने बताइएको छ ।
खराब ड्राइभिङ, निषेधित क्षेत्रमा धूम्रपान, धेरै भिडियो गेम खरीद गर्ने र फेक पोष्ट गर्ने जस्ता कार्यबाट मानिसको स्कोर घट्तै जाने र कम स्कोर भएमा उनीहरूले पाउँदै आएको सुविधा खोसिने यस मामिलाका जानकारले बताएका छन् । कम स्कोरका कारण चीनमा ९० जनामाथि आन्तरिक उडानमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छ र उनीहरूले अब हवाई उडानको टिकट खरीद गर्न नपाउने सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, खराब व्यवहार गर्ने ३० जनालाई रेलको टिकट खरीदमा रोक लगाइएको छ ।
यसैक्रममा अभिभावकको सोसियल रेटिङ खराब भएकै कारण चिनियाँ शहर सानटोङका केही स्कूलमा बच्चाहरूलाई भर्नामा रोक लगाइएको समाचार छ । चीनमा ‘सोसियल रेटिङ सिष्टम’ मा जोकोही अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारी अधिकारीले पनि यो नियम तोडेको खण्डमा वा स्कोर कम प्राप्त गरेमा उसलाई पनि जागीरबाट प्रतिबन्धित गर्न सकिनेछ । एक प्रतिवेदनअनुसार सैन्य सेवामा प्रवेश गर्न नमानेका केही युवालाई होलिडे प्याकेज र होस्टलमा बस्न प्रतिबन्धित गरिएको छ । चीनमा मानिसहरूका लागि ब्ल्याक लिष्ट पनि बनाइएको छ । खराब व्यवहारका आधारमा यसमा मानिसहरूलाई समावेश गर्दै लगिनेछ । सरकारी जागीर दिनुभन्दा अघि यस्तो सूची एकपटक जाँच गर्नुपर्ने बताइएको छ ।